“Tsy Afaka Hanitsakitsaka ny Maha-Olona ny Hafa Isika Raha Tsy Efa Nanao Tsinontsinona ny An’ny Tenantsika” · Global Voices teny Malagasy
Mijanona ao koa raha hisintona ny hafa ho anaty fotaka.
Voadika ny 03 Avrily 2019 11:15 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Deutsch, Español, Français, Swahili, English
Ireo blaogera enina voafonja: Atnaf Berahane, Mahlet Fantahun, Zelalem Kiberet, Befeqadu Hailu, Natnael Feleke, Abel Wabela.
(Fanamarihana: ity lahatsoratra ity dia navoaka tamin'ny teny anglisy ny May 2015.)
Tamin'ny volana Aprily ny taona lasa iny, blaogera sivy sy mpanao gazety no nosamborina tao Etiopia. Ny maro tamin'ireo lehilahy sy vehivavy ireo dia niasa niaraka tamin'ny Zone9, blaogy ifandrimbonana iray izay miresaka ireo olana sosialy sy politika ao Etiopia ary mampahafantatra momba ny zon'olombelona sy ny fandraisana andraikitry ny governemanta. Mpanoratra ato amin'ny Global Voices ny efatra amin'izy ireo. Tamin'ny volana Jolay, nampangaina araka ny Lalàna Fanoherana ny Asa Fampihorohoroana tao amin'ny firenena izy ireo. Hatramin'izay, nigadra izy ireo ary imbetsaka no nahemotra ny fitsaràna azy ireo.
Niasa mafy nandritra ireo roa ambiny folo volana ny vondrom-piarahamonina Global Voices sy ny tarika avy ao Afrika ambanin'i Sahara mba hisarihana ny saina mikasika ny raharahan'izy ireo sy mba hankalazana ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny lahateny an-tambajotra. Ato anatin'ireo herinandro ho avy, antenainay ny hanasongadina ny olona tsirairay miaraka amin'ny soratanany, ny kolontsaina, ny tononkalo na ny lahatsary manokana. Ao anatin'ity lahatsoratra voalohany ity, miresaka ny tolon-tsika miaraka amina fangaro-na lahatsoratra tsotra sy tononkalo ilay Nizeriana mpanoratra sady poety, Nwachukwu Egbunike.
“Tsy Afaka Hanitsakitsaka ny Maha-Olona ny Hafa Isika Raha Tsy Efa Nanao Tsinontsinona ny An'ny Tenantsika”. Ny Igbo, pragmatika hatrany, no milaza azy io mivaingana ao anaty ohabolan'izy ireo hoe: – “Onye ji onye n'ani, ji onwe ya” “Izay misintona ny hafa ho ao anaty fotaka dia tsy maintsy hijanona ao anaty fotaka ihany mba hihazona azy.”
Ireo nanankinana andraikitra hisahana ny soa iombonana no nandefa Etiopiana sivy ireo higadra tsy ara-drariny tany am-ponja. Maniry izahay ny hitantara ny tantaran'izy ireo amin'ny herinandro ho avy.
Inona no ao anatin'ny anarana iray? Ny tena ilaina indrindra amin'ny maha-olombelona ny olona iray. Ny fijerin'izao tontolo izao an'i Afrika dia manamarika mazava fa tsy azo fafàna velively ireo anarana.
Ny heloka bevava nataon'ireo blaogeran'ny Zone9 dia noho izy ireo sahy miaina ny “Ubuntu”. Ny vondrom-piarahamonina misy azy ireo no ampiroboroboan-dry zareo raha mitaha amin'ny an'ny isam-batan'olona manokana. Manosika sy mandrodana an'ireo sakana goavana ao amin'ny fonja zary fanaovana oha-pitenana “Zone Nine” ao Etiopia no asan'izy ireo. Ao anaty fijaliana ny fahafahana, maty ny fahalalahana maneho hevitra. Velona ny fahanginana entin'ny tahotra.
Amin'ny alalan'ny fampiasana Aterineto no ampivelaran'ireo lehilahy sy vehivavy ireo ny faritry ny fahalalahana. Saingy, ho tambin'izay, voaendrikendrika ho mpampihorohoro izy ireo. Any am-ponja izy ireo ankehitriny.
Maniry ny hamelona an'ireo anarana ireo ny Global Voices Advox ary hitantara amin'ny rehetra ny tantarany be herim-po. Tianay hosorohana ny fomba fijery tsotsotra hanisàna fotsiny azy ireo ho toy ny tarehimarika na ho toy ireo maritiora. Manana ny anarany izy ireo, ny tantarany, ny maha-izy azy, ny olany, ny hadisoany.
Sivy fa tsy aotra
Voatampim-bava fa tsy moana
Foanana fa tsy voafafa.
Tantaraina eto ny anaran'izy ireo sy ny tantarany. Avy amin'io, karohanay izay tsy hanadinoina velively ny feon'izy ireo sady mba hitazonana ny feo mafin'izy ireo, mandra-piriarian'izy ireo malalaka indray.